विज्ञान Archives - पोखरा समाचार
१७ पुष २०७५, मंगलवार १५:०२ 01/01/2019 पोखरा समाचार
पोखरा । पर्वत देउपुरका दिलबहादुर सार्की को हत्यामा संलग्नलाई कास्की प्रहरीले सोमबार सार्वजनीक सार्वजनिक गरेको छ । १४ गते अन्नपुर्ण गाउँपालिका वडा नं – १० खुम्व्रुखु स्थित मोदी खोलामा मृत लाश फेला परेको हत्यापछि दिलबहादुरको पुस ९ गते पहिचान हुन नसक्ने अबस्थामा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका खुम्व्रुखु स्थित मोदीखोलामा फालिएको थियो । १४ गते खोलामा शव देखेपछि गाउँलेले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा निमबहादुर सार्की, उनका भाई लालसिंह र निमबहाुरका छोरा बुद्धिमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका तिनै जनाले रक्सी खुवाएर कुटपिट गरि दिलबहादुरको हत्या…
ताजा खबर विज्ञान समाज
पोखरा । क्यान महासंघ कास्कीले आयोजना गरेको नवौं क्यान इन्फोटेक जारी छ । इन्फोटेकको अवसरमा आइतबार आइसिटी हाजिरीजवाफ प्रतियोगिताको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । १० वटा कलेजको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा ४ वटा कलेज फाइनलमा प्रवेश गरेको प्रतियोगिता संयोजक घननाथ सापकोटाले जानकारी दिए । फाइनलमा राष्ट्रिय उच्च मावि, ग्लोबल कलिजिएट, बालमन्दिर उच्च मावि र केफ उच्च मावि प्रवेश गरेका छन् । फाइनल प्रतियोगिता इन्फोटेकको चौथो दिन सोमबार हुने उनले बताए । इन्फोटेकमा कम्प्युटर तथा ल्यापटपको निःशुल्क मर्मत सेवा उपलब्ध गराइरहेको अध्यक्ष युवराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘आइसिटी क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट गरिएका…
काठमाण्डौं । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले एक वर्ष भित्रमा प्रत्येक वडामा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले मुलुक संघीय प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको शीघ्र विकासका लागि सूचना प्रविधिको विकास अनिवार्य भएको भन्दै आगामी कात्तिक १५ गतेसम्म नेपालको प्रत्येक गाउँमा सञ्चार सेवा पु¥याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । दुई वर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउने सरकारको उद्देश्य रहे पनि काममा ढिलाइ भएको भन्दै समितिले जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । अब एक वर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पु¥याउने उद्देश्यले अप्टिकल फाइवर…
१३ भाद्र २०७४, मंगलवार १९:१६ 29/08/2017 पोखरा समाचार
के तपाईको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट छ ? फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राफ, ह्वाट्सएप… अन्य थुप्रै.. तपाई यीनलाई दिनमा कति पटक चेक गर्नुहुन्छ ? नयाँ म्यासेज, लाइक, रिप्लाई वा कमेन्ट हेर्नको लागि तपाई सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट कयौं पटक लग इन गर्नु हुन्छ। कयौं पटक यस्तो हुन्छ कि तपाईलाई समय नै मिल्दैन, आफ्नो फेसबुक ट्वीटर फिड चेक गर्न भ्याउनुहुन्न। अनि तपाईलाई टेन्सन हुन्छ। वास्तवममा तपाई एक्लो हुनुहुन्। पुरै विश्वमा निकै यस्ता व्यक्तिहरु छन् को सामाजिक सञ्जालको लतमा छन्। फेसबुक, ट्वीटर चेक नगर्दा बेचैन हुन्छन्। मनोवैज्ञानिकहरु यसलाई एक लत, एक रोग मान्न थालेका छन्। सामाजिक…